Ny toe-tsain'ny Malagasy no tsy mampandroso an'i Madagasikara
Ny toe-tsain’ny Malagasy no tsy mampandroso an’i Madagasikara5 minutes de lecture
TOE-TSAINA GASY – Firenena nanana ny maha izy azy I Madagasikara tany aloha, indrindra fony andro faha mpanjaka ka mbola tsy voazanaka isika. Nanana ny naha izy azy, nanana ny fombany, nahaleo tena ara-toe-karena.
Ankehitriny, efa nivadika ny rasa satria an’isany firenena mahantra indrindra eran-tany i Gasikara raha toa ka efa lasa lavitra ny firenena sasany toa ny Nosy Morisy na i Chine.
Maro amintsika Malagasy no milaza ho tia Tanindrazana nefa manary ny maha izy azy antsika, mandà ny kolontsaintsika… Ny tanora ankehitriny moa dia efa maro an’isa no revo amin’ny kolontsaina vahiny. Tsy mahafehy ny fanatontoloana.
Maninona i Madagasikara no mahantra ? Maninona ny Malagasy no mahantra ? Ny toe-tsaintsika no antony. « Izay ilay toe-tsaina gasy » : fehezanteny efa fahenontsika loatra !
Fiainana « mora mora »
« Mora mora », io no teny filamatra ho an’ny Malagasy. Ireo teny ireo mihitsy moa no ahafantaran’ny vahiny antsika. “Madagascar, le pays du mora mora”. Alaina milamina hono ny fianana e ! Tsy taitra, tsy maika… Nefa tara ihany.
Raha dinihina dia io toe-tsaina maka milamina, tsy rontotra, “mora mora” io no maha taraiky antsika Malagasy. Lasa fomba fiainana sy fomba entina itondrana ny fiainanana izany. Mandeha moramora daholo. Ohatra : raha misy zavatra atao dia angatahana fotoana lava ny fanatanterahana azy. Tsy dia ivakiana loha daholo ny zavatra atao. Tsy miraharaha fotoana. Tsy zatra mametraka tanjona ilaina vita anaty fotoana.
Ny vesatry ny fianakaviana
Mazàna dia manana toe-tsaina katsetsitra ny Malagasy, indrindra raha misy havana “tafita” na lasalasa amin’ny fiainana. Satria izay ilay “fihavanana” hoy ny sasany satria ifanampiana ny fiainana. Ary ny fianakaviana tsy maintsy mifanohana sy mifanampy.
Samy manana ny famaritany ny atao hoe “fifanohanana” sy “fifanampiana” kosa nefa. Firifiry amin’ny Ray aman-dReny malagasy ankehitriny no mitaky vali-babena amin’ireo zanany ? Firy amintsika no tsy “misolelaka” amin’ny havana manana mba hahazo zavatra na tombotosa ?
Zava-misy eto amin’ny fiarahamonina io fa tsy misy sahy miteny.
Fialonana, tandra vadin-koditra amin’ny Malagasy
Ny fialonana, toe-tsaina mampiavaka loatra ny Malagasy. Indrisy. Raha vao misy mpiray tanàna, namana, havana manana noho ny tena dia ialonana ary ankahalaina avy hatrany.
Firifiry amintsika no mamorona atsanga tsy aman’orana, mifosa, mamafy lainga mikasika olona iray noho io fialonana io ? “Manao afera maizina no mampanan-karena azy”. “Manao bizina bois de rose iny fa manafina”…
Ny Malagasy dia tsy faly amin’ny fahatafitan’ny hafa. Izay tafasondrotra dia sintomina midina. Raha tsy vita ny mampidina azy dia gafiana. Ny tsy fantatry ny maro dia izay tafasondrotra anie afaka manampy ny hafa hiakatra koa e !
Te hanova zavatra, te handroso nefa kamo. Kamo ara-tsaina indrindra indrindra. Tsy zatra na nozarina handray andraikitra fa miandry mana avy any an-danitra na miandry fahagagana.
Betsaka isika no mikatsaka fianan-tsambatra nefa tsy manao na inona na inona hahatonga izay.
Ireo izay manana fahasahiana hihetsika dia enjehana foana, lazaina fa “miseho milay”, dedaka, te ho deraina… Tsy ao mihitsy ilay toe-tsaina tia fivoarana sy fiovana fa faly mionona amin’ny zava-misy fotsiny.
Hany ka tsy mahagaga raha toa izao ny firenentsika. Tsy mila mandeha lavitra fa azo raisina ohatra ny tanànan’Antananarivo, izay an’isan’ireo renivohitra maloto indrindra eran-tany. Izay mba manadio lazaina fa dedaka, izay faritra voadio, afaka ora vitsy dia maloto indray.
Taranaka tsy ampy fanabeazana
Tsy mamolavola olom-banona intsony ny rafi-pampianarana eto Madagasikara. Toa izany koa, vitsy sisa ireo Ray aman-dReny no mbola mitaiza ny zanany ho lasa olom-banona sy hanam-pahendrena. Rehefa mianatra, misakafo sy mitafy dia ampy izay. Hany ka tsy mahalala fomba, tsy mahafantatra ny tokony atao, kamo misasatra, tsy mahalala ny maha Malagasy azy ny ankizy sy tanora ankehitriny. Voazanaka ara-tsaina.
Nefa raha tiana handroso ny firenena dia ny fanabeazana ny taranaka no mila atao vaindohan-draharaha. Ny mpanabe no mila mampita ny fahendrena amin’ny taranaka. Dieny mbola kely izy ireny dia mila zarina hadio, handray andraikitra, hanaja ny maha Malagasy azy, hanasoa ny manodidina, hahay hikiry mba hahazo zava-tsoa…
Tsy ny diplaoma ihany no ratovina any an-tsekoly fa ny fahendrena indrindra indrindra !
Malagasy tsy manaja rafitra sy lalàna
Ny modely dia avy any ambony foana ! Firy amin’ireo mpitondra no tena manaja ny lalàna velona misy eto amin’ny firenena ? Rehefa tsy tan-dalàna, tsy matahotra ny lalàna ny mpitondra dia mazava ho azy fa torak’izany koa ny vahoaka. Raha tena dinihana dia efa tafiditra anaty fenitry ny fiarahamonina Malagasy ny fahafahana mandika ny lalàna. Mila manone kely ny mpiasam-panjakana ohatra dia vita haingana ny taratasy. Azon’ny fiara vaventy atao ny miditra an-tanan-dehibe amin’ny lera izay tiany satria nanao kolikoly hahazoana taratasy fahazahoan-dàlana. Ohatra fotsiny ireo fa maro ny tranga azo tantaraina.
Ny mpitondra foana no diso
Matoa ny mpitondra tsy mahavita ny asany sy fampanantenana nataony dia ny vahoaka no tsy mahafantatra hoe izy no tena tompon’ny fahefana ary afaka mitaky ny tamberin’andraikitra amin’izay olona nofidiany.
Raha tsy voafehy ny fiakaran’ny vidim-pianana, raha manjaka ny tsy fandriampahalemana… Ny fanjakana foana no diso. Mety ho marina ihany nefa misy anjara andraikitry ny Malagasy rehetra koa nefa.
Ny Malagasy dia faly mimenomenona fotsiny fa tsy mandray andraikitra.
Ny toe-tsaina tsy mampandroso
Matoa Magasikara, firenena malalantsika, toa izao dia noho isika ihany. Izay afaka moa dia mifindra monina amin’ny amin’ny firenena matanjaka satria any no misy fiainana tsaratsara kokoa. Izay mbola eto dia manao “samy maka ho azy”, samy manao izay tsy hahafaty ny tenany na dia hamotehana ny hafa azy.
Raha tiana hiova Gasikara dia isika Malagasy no mila miova toe-tsaina voalohany ka miala amin’ireo toetra voalaza etsy ambony ireo.
Mandray andraikitra ny tsirairay eo an’ivon’ny fianakaviana sy ny fiarahamonina.
Mifanampy miara-misondrotra amin’ny fiainana.
Tsy mialona ireo manan-katao fa miezaka hiakatra farim-piainana.
Manaja ny lalàna ary manohitra ny tsy fanarahan-dalàna.
Mitaky ny tamberin’andraikitra amin’ny mpitondra fa tsy faly minenomenona sy manome tsiny ny fanjakana.
Fa ny tena zava-dehibe dia ny fanabeazana. Ny taranaka no ho avin’ny firenena. Raha ireo no voavolavola tsara ny toe-tsainy dia handroso ho azy ny firenena. Ny fanabeazana ho olom-pirenena vanona izany no tokony ho vaindohan-draharahan’ny fitondrana ankehitriny.
Article précédent Comment préparer son voyage à Madagascar ?
Article suivant Auto-tune : un ravage pour la musique malagasy
8 Comments on “Ny toe-tsain’ny Malagasy no tsy mampandroso an’i Madagasikara”
Marina daholo ireo voalaza saingy @ ampahany, rehefa tena vakiana tsara mantsy ny lahatsoratra manontolo dia toa manaporofo loatra hoe tena olona tsy misy ilana azy mitsy ny malagasy manonolo, toy ny hoe tsy misy lafitsranay mihitsy ireo toetra malagasy ireo fa rasty avokoa, izay fotsiny no olana
andriamiaza dit :
Marina be ny voalaza, fa matoa koa nilatsaka hitondra ny firenena dia mahita tetika hampandroso ny firenentsika. Matoa be resaka ahita vahaolana , nitondra projet de société dia mahita vaholana. Tsy hoe tonga eo vao miala ilany.
Tsy tia mitratrevatreva ny gasy, fa milamina, olon’ny fihavanana, olon’ny marimaritra iraisana, dia jerena toy ny moramora. Olona miheritreritra, miherim-panahy ( meditation). : » Ny tanety lava mahalasa fisainana » toy ny « Takatra amorom-parihy, tsy matory fa miherim-panahy.
Fa mila hafainganana ny toe-trandro, fa ilay gêne/ ADN anefa mbola eo. Mila mpitondra mahay, mitarika.
Ny vesatry ny fianakaviana:
Mbola tsy ampy fampianarana koa, ka tsy miavo-tena fa manatena ny any ivelany foana, dia ny fianakaviana akaiky aloha no atao lasibatra, miha-ratsy ny Fihavanana. Mila fampianarana avy amin’ny mpitondra, sy ireo zoky raiamandreny.
Fialonana, spaoro malagasy.
Ny filozofia gasy teo amin’ny Ntaolo, dia filozofia bodista mahayanista ( Dama Ntsoa). Mitovy daholo ny olombelona amin’ny ara-panahy, samy mety ho voavonjy, fa tsy nisy ny fampianarana, toy ny tany ampita, noraisina ho fitovizana ara-batana sy ara-tsaina, tsy noraisina intsony ilay » fanahy no olona » dia natao izay hitovizan’ny rehetra, ary ny akamaroany vendrana dia izay misondrotra nositomin’ireto vendrana.
Ka tsy misy tia hiakatra , mandray andraikitra, sao hialonan’ny sasany, misy ny mpamosavy, izay voataiza tamin’izany ihany no mandray andraikitra, matetika manambany ireto vendrana rehefa tafakatra, dia miodina eo ilay cercle vicieux hoy ny teny fanjanahana.
Taranaka Tsy ampy fanabeazana.
Ny Fanabeazana dia adidin’ny Mpitondra. Ny mpitondratsika hatramin’izay anefa ,ireo naharitra ela, dia ny mpanjanaka no nametraka azy. Nanapotika ny fanabeazana izy ireo, mba ho bado sy mahantra ny malagasy. Mitohy foana izany ankehitriny. Ny vahoaka no mila mandray andraikitra amin’ny fanabeazana, fa ny mpitondra bolokin’ny mpanjanaka dia tsy hianteherana.
Malagasy tsy manaja rafitra sy lalàna.
Avy amin’ny Fanjanahana io. Tsy hazavaina aminy ny nanaovana ilay fitsipika, fa noterena vay manta fotsiny hoe -ataovy io- Dia nataony tsizarizary, moramora, zavatra noterena dia lasa 30 andro ny iray volana.
Ny mpitondra foana no diso.
Koa iza ary no homena tsiny eo. Tsy nampianarina handinin-tena ianao, dia ny mpitantana, ny mpanabeha no diso.
Raha bangoina dia ny fanabeazana no tsy misy.
Mpanao kopikole ny mpitondra. Tsy mahafantatra akory ny tantaram-pireneny, misy aza tsy mahay teny gasy akory, dia inona no ho azon’ny Vahoaka madinika mpamokatra amin’ny teny Fanjanahana, mizara roa ny firenena toy ny any ivelany faka-tahaka: misy mpanana, 10% mitazona ny 80% n’ny harena dia misy vahoaka 90% miaina amin’ny 10% ny harena
Randriamihajamalala Fidy dit :
Ialako tsiny raha misy tohina @ ty fijeriko ity.Miangavy fotsiny aho mba ho vakianao hatr@ farany .
Ny asako dia mpitsabo mpampiesona (Medecin Anesthésiste) .Efa nitety firenena lehibe vitsivitsy 3 (Corée du Sud ,Japon ,France) mikasika io asako io ihany.
Misy fomba 2 @ ankapobeny ny fomba fampiesonana :
1)@ alalan’ny fampiasana fanafody ka ny anesthésiste no manao azy satria izy dia niofana manokana an’izany.
2)@ alalan’ny resaka ,safosafo ,fihetsika ,sary ,films, boky.,tantara.,ny religions …
Raha tiana hiesona ny olona na ny biby dia ny subconscient na ny Fanahy no mahaolona no kendrena voalohany na @ ilay 1) io na ny 2) .
Ny faha 2) no nampiasain’ny vazaha ary mbola tohizany( entretien de l’ Anesthesie)
Eto M/car ny tena mandaitra indrindra (la technique la plus efficace ) dia ny Finoana Kristiana (religions chrétiennes) mihoatra ny 80% no miesona (hypnotisés )ao anatiny.Tsy hiresaka finoana @ mahafinoana azy akory aho satria tsy nianarako sady ny Firenena rehetra dia samy manana ny finoana arahiny arak’izay napetraky ny razambeny taloha.
Mikasika an’i M/car manokana dia nandefa ireo misionera vazaha (prêtres ,religieuses, pasteurs …..) « nampiesona « araky ny nanofanana azy miaraka @ fitaovana isankarazany (sary ,baiboly ,boky ,tantara ,hira , horonantsary ,…).Io ilay induction anesthesique izay tsy maintsy tohizana (entretient anesthesique ) satria manjary taitra ilay olona raha vao ajanona ny fampiesonana.
Mana avy any an-danitra ,miandry fahagagana ,hoy ianao? Tany ampiangonana no nahaizany izany voambolana izany fa tsy tany antsekoly akory .rehefa kamo hiasa saina izy satria domelina ny fampiesonana dia izay mahasoa ve tsy hataon’A/tra.
Ny tanjon’ny mpadidy (Mpanjanatany ) dia ny tsy hitiavan’ ny Malagasy ny taniny ,ny fombany ,ny fiteniny ,…..Ampanantenainy Jerosalema vaovao (fa tsy mba M/car vaovao ).Ny vazaha no mahalala bebekokoa an’i M/car noho ny Malagasy.
Ohatra ihany ireo fa lavabe raha ho tantaraina dhl.
Vahaolana (sosokevitra ihany ny ahy ):
Misy ny atao hoe « antidote » azo atao mba mety hampifoha na farafaharatsiny mba mety hampihena ny fatran’ny fampiesonana :
1)Ampadoavina hetra toy ny any ethiopie ,Allemagne …ny religions satria mampidi-bola
2)Ny rakitra isaky ny alahady dia alefa hanatsarana ny sekoly na ny hopitaly
3)Ny « mpitaiza ara-panahy « (anesthesistes ) dia mba tokony mandray anjara @ fampianarana ankapobeny @ fiainana andavanandromandritry ny toriteny (fahadiovana .,fahalalam pomba …).
Vitsy ny nandalo sekoly noho ny nandalo fiangonana ,ary misy aza ny manadino ny zvt nianarany rehefa nahita fiangonana (effets secondaires de l’ anesthesie )
4)ry zanak’ampielezampielezana rht.Mahavita adidy maro eo @ fiangonana ianareo(tilikambo ,pilpitra ,carreaux, zvmaneno….) ,inona no mahasakana anareo tsyanao adidy any @ sekoly nihavianareo (dabilio ,tsaoka ,karama ny mpampianatra …na ny hopitaly any ambanivohitra misy anareo..?
Ny mpampiesona (mpitaiza ara-panahy ) sady omena trano ,karama sns
Ny mpampianatra sy mpanabe (mpitaiza ara-batana sy ara- tsaina )tsy misy miraharaha.
Fehiny ny fiovan’ ny toe-tsaina dia any antsekoly fa tsy any ampiangonana
Rasoloniaina R. dit :
Misaotra indrindra Atoa Fidy.. Hay misy Malagasy marary noho ny TSY fandrosoan’ny Fireneny. Tena mahonena tokoa. Tsy aminao sanatria no mivantana ity soaratra ity, fa ho an’ilay dedaka « sarim-bazaha » nanoratra voalohany.
Miverina kely @ ilay lahatsorata nataon’ilay ranamana aho, fa tena mahazendana. Ireny no atao hoe: « Rajakombazaha », na koa hoe « Ramasombazaha ». Fijerimbazaha daholo no nijereny ny malagasy. Ary angamba safiotra izy io. Mampalahelo.
DISO DAHOLO ny voalazany Hita ao anatin’ny teny malagasy daholo ny toe-tsain’ny malagasy. Ny teny tompoko, no mandrafitra ny fisainana sy ny fihetsika. Ianaro ny tenindrazanao, dia ho hitanao ny tsirony. Fa vitsy ny olombelona lalin-tsaina sy manam-panahy toy ny malagasy. Tsy fantatrao akory aza angamba ny dikan’ny hoe MADAGASIKARA. Anontanio ny frantsay raha hainy izany, fa azoko veroka fa any frantsa ianao, na mpitia frantsay.
Tsy ny toe-tsaina no mahatonga ny malagasy hahantra, araka ny fijeriko azy. Tsy misy angamba olona maniry ny hahantra. Zavatra maro sosona no mahatonga ny fahantrana. findramam-bola @ Banky iraisam-pirenena sy ny trosa aterak’izany. Aza adino, fa misy firenena Afrikana 14 mbola mandoa vola @ renimalalany nanomboka t@ 1960 ka hatramin’izao. I renimalala izay tsy manana lavaka iray akory misy volamena, nefa manana tahirym-bolamena mihoatra ny 2000 Taonina. Dia izy ve no mazoto miasa, sy tsara toe-tsaina?
Ity misy ohatra iray: firy ny firenena manana ohabolana maro toy ny malagasy, ankoatra ny Iraniana (na Persa taloha)? misy 8000 mahery ireo tompoko. Iza no manana fomba fiaraha-mitantana toy ny malagasy manao hoe: »-Ny teny midina, ifampifehezana; ny teny miakatra, ifampierana ». Izany no tena demokrasia, taloha lavitra ny Grika. Ary mbola tsy ren’ny sofinao ny hoe:-« Aleoko ianao tsy àry, aleoko ianao tsy misy, toy izay tsy nahavita soa ho an’ny tany nahabe »!!!
Ianao no Mitady doka @ vazaha, ka mangàla-pijery- » any aminy, dia ny malagasy no ambanimbaniana.
Fiangaviana ny ahy: rehefa miresaka ny Malagasy, dia ataovy teny gasy; fa mahamenatra raha malagasy no fantany fa manivaiva ny razany.
Misaotra anao Atoa Fidy, fa tsy mifanalavitra ny fijerintsika.
Ratsifa Bako dit :
Ok Misaotra daholo , raha te handroso de Mila mahatanty tsikera de manova zavatra
Tchoumba-fu dit :
Ekena fa manana ny fombafomba
Ekena fa manana ny maga gasy azy
Ekena fa voajanaka
Ekena fa nisy ary mbola misy mpitondra tsy nampiharina ny firenena
Ekena fa tsy ampy fanarana
Ekena fa simba ny toe-tsaina
Ekena daholo izany rehetra fa indro kosa
Iza no manaka ny hiarina ?
Iza no manakana ny tsy handroso ?
Iza no manakana ny tsy hihova ?
Iza no mankana ny tsy hisondrotra ?
Ianao irery ihany no valiny izany rehetra izany ! Izay efa vitan’ny taloha sy ny ny teo aloha dia efa any izany ! Maninona no mifampijerijery vao hoe inona no azo atao ?
Atombohy amin’ny tenanao ny fihovana fa aza miandry ny hafa foana !
efa 21ème siècle ve dia mbola tsy mahay misaina irery fa mbola mitanisa ny lasa foana ?
SAMY NOMEN’ANDRIAMANITRA SAINA MBA HANDROSO !
AMPIASAO NY SAINAO DIA ATAOVY IZAY AZONAO ATAO FA AZA MIALA-BALA @ TEO ALOHA
Radalo dit :
Aza adino fa ny firenena mandroso rehetra día ny organe de controle no matanjaka
Omeo fahafahana ny serasera sy ny fanehoankevitra
Omena fahafahana ny fitsarana
Ny fanjakana no miantoka ny vola hanaovana fampielezankevitra
Tsy miohatra ny enina ny antoko misy.